कुराकानी – Himal Patrika
उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केहि स्थानमा हिमपात…
कुराकानीJanuary 6, 2019
काठमाडौ,२२ पुस । जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाले आज दिउँसो देशको पश्चिमी क्षेत्रमा सामान्य देखि पूर्णतया वदली र बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली रहने जनाएको छ । पश्चिमी भू–भागका केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहनुका…
अत्यधिक चिसोले विद्यालय बन्द
कुराकानीJanuary 2, 2019
हुम्ला, १८ पुस । अत्यधिक चिसोका कारण सोमबारदेखि जिल्लाका निजी तथा सामुदायिक विद्यालय ४५ दिनका लागि बन्द भएका छन् । सरकारले हुम्लालगायत हिमाली जिल्लामा चिसो अत्यधिक हुने भएका कारण बर्सेनी बिदा दिँदै आएको छ ।…
प्रदेशलाई प्रदेशकै रुपमा बुझ्नुपर्छ, ती अलग राष्ट्र होइनन्ः…
कुराकानीSeptember 19, 2018
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई विभिन्न तहको निर्वाचन भइसकेपछि विकास र समृद्धिको लक्ष्यसहित नयाँ सरकार गठन भएको आजै सात महीना पुगेको छ । लामो समयको सङ्घर्षबाट जनताले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सुशासन…
कुराकानीJune 24, 2018
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि बढाउनुभएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई चीन र भारतका दुवै सरकारले महत्वपूर्ण भनेका छन् । दुवै मुलुकले सरकारीस्तरमै स्वीकारेका छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई…
कुराकानीMay 21, 2018
नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र वास्तवमा बिरामी छ । गम्भीर छ, संंकटग्रस्ट छ । सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रले भनेको अवस्थामा छ । श्वेतपत्रबारे पक्ष बिपक्षमा भएको बहस अन्यथा लिनु हुँदैन । सामान्य कुरा कृषिको अवस्था जर्जर छ…
विज्ञानराजले खुलासा गरे विमानस्थलबाट सुन छिराउने तरीका !
कुराकानीMay 3, 2018
काठमाडौँ, २०बैशाख । विमानस्थलबाट सुन कसरी भित्रिन्छ ? पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मासंगको अन्तरवार्ता नयाँपत्रिका दैनिकले छापिएको छ । विमानस्थलमा प्रहरी मात्र होइन, भन्सार, राष्ट्रिय अनुसन्धान, अध्यागमनजस्ता संयन्त्र हुन्छन् । यत्रो सुन आउँदा तिनले के हेर्छन् ? …
चीनले मकाउ-हङकङ र भारतले गोवा फिर्ता लिन हुने,…
कुराकानीApril 23, 2018
नेपाल र बेलायतबीच सुगौली सन्धि भएको २०० वर्ष पुगिसकेको छ । दुई सय वर्षअघि नेपाली शीर तत्कालिन अंग्रेजका सामु झुकेर नेपालको मेची र महाकाली पारीको जमिन गुमाउनु परेको थियो । तर सन् १९४७ मा बेलायतबाट…
कुराकानीMarch 30, 2018
काठमाडौँ,१६ चैत । मुलुकमा बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोग (एमडीआर टीबी) ले हालसम्म उपचारमा संलग्न २१ स्वास्थ्यकर्मीकै मृत्यु भएको छ । सात वर्षयता बिरामीको उपचार र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको एमडीआर टीबी सरेर मृत्यु भएको हो । ‘हालसम्म एमडीआर…
‘ललिपप बाँडेर कांग्रेस अघि बढ्न सक्दैन’ – शेखर…
कुराकानीMarch 14, 2018
कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको स्थान पुगेको छ,बामपन्थी सरकार बनेपछिको परिस्थितिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? अहिले देशमा अराजकता बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब सबै समस्या समाधान गर्छु भन्नुभएको छ नि ? अहिलेको सरकारले तीन चौथाई…
‘ मानिसले अप्राकृतिक यौन जीवन बाँच्न खोज्दा दुर्घटना…
आफ्नै कुराFebruary 26, 2018
स्वामी आनन्द अरुण एउटा यस्तो नाम हो,जसको बारेमा बताउन थप शब्दहरुको प्रयोजन छैन । काठमाण्डौको नागार्जुन जंगलस्थित ओशो तपोवन इन्टरनेसनल कम्युनका संस्थापक हुन्, स्वामी अरुण । उनले स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा समेत दर्जनौ मेडिटेसन सेन्टर…